🥇 ▷ Telegram-ka iOS wuxuu ku darayaa war dheeraad ah oo ku saabsan tafatirka fiidiyowga iyo dhejiyayaasha ✅
Telegram-ka iOS wuxuu ku darayaa war dheeraad ah oo ku saabsan tafatirka fiidiyowga iyo dhejiyayaasha
Cusbooneysiinta Telegram-ka wuxuuna sii wanaajiyaa sawirrada iyo isku dhejinta sawir
Telegram, gabay Barnaamijyada farriimaha qoraalka iyo farriinta ee loogu talagalay iPhone iyo iPad, cusbooneysiiyay. Cusboonaysiintaan cusub ee bilaashka ah, ee laga heli karo App Store ee dhammaan isticmaaleyaasha, waxay ka kooban tahay dhowr hagaajin oo diiradda saaraya waxyaabaha dhejiska ah iyo tafatirka fiidiyowyada iyo waxyaabaha ku duuban warbaahinta. Wax ka baro dhamaan wararka kujira cusboonaysiinta barnaamijki ugu dambeeyay soona kala soo bixi hoosta.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Telegram-ka u hel aaladaha ‘iOS’
Kuwa aan aqoon barnaamijkan caanka ah, Telegram waa codsi fariin ah oo la jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada., marka lagu daro aaladaha kale ee mobilada iyo kombiyuutarka, kuwaas oo diiradda saaraya xawaaraha iyo amniga. Waa mid aad u dhakhso badan, fudud oo xor ah.
Barnaamijka Telegram wuxuu si xamaasad leh ugu dhexmaraa aaladdaada oo dhan, isagoo u oggolaanaya in lagu isticmaalo kombiyuutarada, kiniiniyada, iyo taleefannada. Waad diri kartaa tiro aan xadidnayn oo ah farriimo, sawirro, fiidiyooyo, iyo faylal (.doc, .zip, .pdf, iwm). Kooxaha Telegram Kooxaha waxay leeyihiin illaa 200 xubnood waxayna u diri karaan warbaahinno gaaraya illaa 100 xiriiriye markiiba. Waad hubin kartaa websaydhka rasmiga ah ee Telegram si aad u aragto liiska codsiyada Telegram ee dhammaan mobilada, xisaabinta iyo xitaa aaladaha internetka.
Thanks to codsigan, waxaad ku raaxeysan kartaa adeegyo farriin deg deg ah oo aamin ah, oo leh kaydinta daruuraha, taageerada kooxaha wada sheekaysiga, oo kuu oggolaanaya inaad wadaagto, waa aalad la isku halleyn karo oo aan ku jirin xayeysiis, marka lagu daro ilaalinta asturnaanta isticmaale iyo waxa gabi ahaanba waa BILAASH.
Maxaa ku cusub nooca Telegram-ka? 2.14
Nooca cusub ee arjigan, horumarinnada soo socda ayaa lagu daray:
Iska yaree, ciyaar oo tafatir fiidiyeyaasha kahor intaadan wadaagin.
Isla hal mar u dir fiidiyowyo oo ku dar faallooyinka.
U dir dir-iliyeyaasha tab tab gaar ah (waxaa lagu dhaqaajin karaa barnaamijka Wada Hadalka).
Ku rakib oo wadaag qayb ka mid ah calaamadaha wax lagu dhejiyo.
Haddii aad tahay qof farshaxan yaqaan ah, samee waxyaabo gaar ah oo dhejiska isku dhejinaya.
Ka soo degso Telegram-ka iOS-ka App Store
Hadaadan wali haysan Codsiga fariimaha ee loogu talagalay iPhone iyo iPadWaxaad ku rakibi kartaa adiga oo maraya xiriirinta tooska ee soo dejinta, kana soo socota App Store, oo aad ka heli doonto hoosta.
Messenger Telegram gudaha App Store, waxay u baahan tahay macruufka 6.0 ama kuwa cusub ee la jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Codsigan waxaa loogu talagalay iPhone 5iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soo socda: Isbaanish, Jarmal, Kuuriyaan, Ingiriis, Talyaani, Holandees, Boortaqiis iyo Carabi.